Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 8)
$ 1 ee PRODUCT (RED) ee iibsi kasta oo ka tirsan websaydhka Apple
Apple waxay ugu deeqi doontaa doolar iibsasho kasta oo lagu sameeyo Apple Pay, bogga rasmiga ah, dukaamada ama App Store ilaa bisha soo socota ee December 2
Maalin kasta - Apple wuxuu ku heesaa "Mea culpa"
IOS 13 waxay ku leedahay sumcad xumo aad u xun dadka isticmaala iyo horumariyeyaasha, taas oo keenta madax xanuun badan oo ku dhaca qof kasta oo cayayaanka qaba ...
IPhone 12 Pro wuxuu lahaan karaa 6GB RAM
IPhone 12 Pro cusub iyo Mac Pro waxay heli karaan 6GB oo RAM ah sababo la xiriira astaamaha cusub ee kamaradaha iyo muraayada afaraad
Apple wuxuu Daahfuray Apple Music Ganacsi: Ruqsad siinta Muusikada ee Dukaamada Tafaariiqda ah
Apple waxay bilawday barnaamijkeeda Apple Music ee ganacsiga, oo ah barnaamij muusig oo qulqulaya si loogu ciyaaro muusig ruqsad haysta dukaamada.
Apple wuxuu kordhiyay mudada soo noqoshada ololaha Kirismaska
Sida sanad walba, Apple waxay kordhisay mudada soo laabashada si dadku ay u iibsan karaan wax soo saarkooda Kirismaska ​​kahor oo ay ula soo laaban karaan dhibaato la'aan.
Podcast 11 × 13: Dhacdada aan cidina fileynin
Apple waxay qof walba kaga yaabisay dhacdo lama filaan ah bishii Diseembar 2, taas oo sidoo kale yeelan doonta diirad gebi ahaanba lama filaan ah.
IOS 13.3 Beta 3 waxay gaaraysaa horumariyeyaasha, laakiin sidoo kale nidaamyada intiisa kale
Marka lagu daro iOS 13.3 Beta 3, waxaa kale oo jira tvOS 13.3, macOS Catalina 10.15.2 iyo watchOS 6.1.1 betas sidaa darteed gabi ahaanba wax ka maqani ma jiraan.
Apple waxay sheegtay inaysan samaynin dinaar dayactirka ah
Hagaag iska jir, Apple waxay sheeganeysaa inaysan wax faa iido dhaqaale ah ka helin dayactirka, xitaa waxay waayi kartaa lacag iyaga la socota.
Waxay ku kacaysaa balaayiin Apple inay hagaajiso khariidadeeda
Khariidadaha Apple ayaa jira, dhammaanteen waan ognahay inay jiraan, laakiin ma badna kuwa sameeya khariidadooda ...
Maalin - HomeKit
HomeKit, barnaamijka madadaalo ee Apple, hadda waa 5 jir. Waxaan ka faa'iideysaneynaa fursad aan kaga hadalno howlaheeda, ...
Barnaamijka WWDC wuxuu noqdaa «Apple Developer» App
Apple ayaa gabi ahaanba bedeshay dalabka WWDC waxayna ku daraysaa magac cusub oo ay weheliso horumarin kale oo gudaha barnaamijka ah. Waxaa hadda loo yaqaan "Developer Apple"
Dhawaan ma arki doonnaa qalin Apple oo leh shaashad?
Patent-ka Apple-ku wuxuu muujinayaa sida qalin qalinka Apple u ekaan karo shaashad iyo dareemayaal soo jiidan kara midabada banaanka.
Markii wax waliba u muuqdeen inay tilmaamayaan in sanadka uu dhammaan doono iyadoo aan dhicin dhacdo, Apple ayaa si lama filaan ah u shaacisay ...
Xogta ugu dambeysa waxay muujineysaa in iPhone 11 dhammaan noocyadiisa kala duwan ay u maleynayaan kororka iibka Shiinaha marka loo eego sanadkii hore.
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala Apple Watch ayaa ka caga jiiday tallaabada shirkadda ee ah inay si ku meelgaar ah "uga baxdo" Apple Watch ...
Apple Watch ayaa lagu qiimeeyay astaamaha lagu ogaanayo arrhythmia. Waa maxay natiijooyinka? Waa maxay waxaas oo dhami?
Sharci cusub oo Jarmal ah ayaa ka dhigi kara NFC-ga ku jira iphone-ka inuu u furan yahay dhinacyada saddexaad
Sharci cusub oo Jarmal ah ayaa Apple ku qasbi kara inuu furo furaha NFC ee qalabkiisa si loogu oggolaado lacag bixinta barnaamijyada dhinac saddexaad.
Apple News + si dhib yar ayey u kortay tan iyo markii ay biloowday Maarso 2019, wali waxay ilaalinaysaa macaamiisha 200.000 markii la bilaabay.
Apple ayaa la filayaa inay hogaamiso iibka 5G ee casriga ah sanadka 2020, kana horeeyaan Samsung iyo Huawei.
Apple Music waxay ku daraysaa liiska «ku celiska ah» heesahaaga ugu dhageysiga badan
Haatan Apple waxay soo saartay "Replay", oo ah liistada shaqsiyadeed oo leh heesaha aan inta badan ciyaarnay sanad gudihiis.
Spotify podcasts waxay sii wadaa inay koraan oo ay dhaafaan Apple dhowr dal oo Yurub ah
Sannadkan oo dhan, maalgashiga Spotify ee podcasts wuxuu ahaa mid aad u muhiim ah, maalgashi ...
Digniin: barnaamijka Facebook wuxuu kiciyaa kamaradda iPhone-ka iyada oo aan fasax laga haysan
Facebook ayaa sameysay bayaan ay maanta ku ogeysiineyso dhamaan isticmaaleyaasheeda leh iphone-ka lagu cusbooneysiiyay iOS 13….
Shirkadii hore ee HBO shirkadeeda waxay la saxiixan kartaa qandaraas gaar ah Apple TV +
Apple waxay heshiis la geli kartaa Richard Plepler, oo ah HBO oo ah agaasimihii hore, si ay u soo saaraan asalka asalka u ah adeegooda Apple TV +.
Podcast 11 × 12: Habemus cusub MacBook Pro
Waxaan ka hadlaynaa MacBook Pro soo socda ee Gurman uu leeyahay Apple ayaa bilaabi doonta berri, waxaan sidoo kale ka hadleynaa qorshooyinka Apple ee sanadka soo socda.
AirPods dhammaan noocyadooda kala duwan ayaa hadda ah badeecada labaad ee ugu iibinta wanaagsan Apple oo kaliya ka dambeysa wax soo saarka shirkadda, iPhone.
Qeybtan maanta waxaan uga hadalnay dammaanadda alaabooyinka Apple, qiimaha dayactirka, iyo waxa ay bixiso AppleCare +.
Blooomber wuxuu muujinayaa qorshayaasha Apple ee laxiriira Xaqiiqada Dareenka iyo Xaqiiqda Virtual ee 3 sano ee soo socota.
Ma taqaan farqiga u dhexeeya 3D Touch iyo Haptic Touch? Waxaan ku baraynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato iyo sida loo qaabeeyo shaqadan cusub.
Waa maxay WiFi 6? Sideed u hagaajin kartaa isku xirka internetka ee gurigeenna? Maxaan ubaahanahay si aan uga faa'iidaysto? Wax kasta oo lagu sharaxay qaybtan.
Haatan Midowga Yurub wuxuu baarayaa Apple Pay si uu u adeegsado dhaqamada suurta galka ah iyo talaabooyinka lagu xadidayo koritaankiisa meesha lagama saarayo.
Fikradda koowaad ee macruufka 14 waxay na tusaysaa qaar ka mid ah howlaha xiisaha leh sida imaatinka 'Split View' ee iPhone ama naqshadeynta astaamaha hadda jira.
Apple waxay rabtaa inay u fidiso macaashka shaqaalaha waalidkood ah
Apple waxay dooneysaa inay xoojiso waxtarrada shaqaalaheeda ay leeyihiin markay tahay waalid noqoshada iyadoo lagu darayo 4 toddobaad oo fasax ah oo dheeraad ah.
Barnaamijyada maalinlaha ah ee maanta waxaan uga hadalnay maaraynta macruufka 13.2 RAM, arrimaha daboolka ka ah movistar, iyo mowduucyo kale oo kulul.
Apple waxay soo saartay Beta-kii ugu horreeyay ee iOS iyo iPadOS 13.3, watchOS 6.1.1 iyo tvOS 13.3, oo hadda kaliya ay heli karaan horumariyeyaasha.
Apple waxay maal galisay $ 2.500 bilyan si looga caawiyo wax ka qabashada yaraanta guryaha
Shirkadda Cupertino ayaa kaliya sameysay maalgashi malaayiin doolar ah si ay uga caawiso California dhibaatooyinka guryaha
Hada WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah u daawato filimada Netflix si toos ah arjiga inta aan wada sheekaysanayno.
Microsoft waxay ku soo bandhigaysaa Office for iOS iyo Android hal codsi
Microsoft waxay ku soo bandhigaysaa Office for iOS iyo Android hal codsi. Isku dar Word, Excel iyo PowerPoint kuna dar shaqooyin cusub adoo isticmaalaya kamarada.
Apple waxay isku dayeysaa inay xalliso adeegsadayaasha aan iibsan karin sanadkooda bilaashka ah ee Apple TV +
Apple waxay siineysaa nambarro dib loo soo iibsan karo sanadka bilaashka ah ee Apple TV + kuwa isticmaala iibsaday qalab wixii ka dambeeyay Sebtember 10.
Isticmaalayaasha Kaararka Apple waxay ku maalgelin karaan iibsashada Apple Store illaa 24 bilood iyada oo aan la helin dulsaar.
Toddobaad ayaa dhammaanaya kaas oo aan wax badan fileynay laakiin aakhirkii arrintu waxay ku sii jirtay ku dhawaaqista AirPods Pro iyo soo saarista Apple TV +.
Apple TV + laguma heli karo oo kaliya bixinta bil kasta, laakiin sidoo kale waxaan ku iibsan karnaa sanad dhan oo leh qiimo dhimis 10 euro ah.
Waxaan si toos ah uga jawaabeynaa su'aalaha aad na weydiiso ee ku saabsan AirPods Pro, oo kaliya ku jiray ...
Diiwaangelinta Ardayda Apple Music waxay hadda la imaan doontaa AppleTV + oo aan laga qaadin wax lacag dheeraad ah.
WhatsApp ayaa la cusbooneysiiyay iyadoo la xallinayo mid ka mid ah khaladaadka u muuqday sida ogeysiisyada iyada oo aan la aqrinin farriimaha wada hadalka aamusnaanta ah
Cutubka koowaad ee "See" ee TV-ga Apple + waxaa ku jira waxyaabo rabshad iyo galmo wata
Taxanaha uu jilayo Jason Momoa, 'See', waa taxane uu abuuray Apple TV + kaas oo aan ku arki karno muuqaalada galmada iyo rabshadaha.
Kuwani waa AirPods Pro waxayna ku kacayaan 279 euro
Sidoo kale waa AirPods Pro cusub oo leh joojinta buuqa firfircoon taasna waxay ku kacaysaa wax aan ka yarayn 279 euro, shaki la'aan waxay siin doonaan waxyaabo badan oo looga hadlo.
IPhone-yada soo socda waxay lahaan karaan bandhigyo gaaraya 120Hz
Xanta cusub waxay xaqiijineysaa inaan heli karno iPhone cusub sanadka 2020 oo leh shaashadaha ProMotion oo leh 120Hz heerar cusbooneysiin ah, sida iPad Pro
Maalin kasta - AirPods Pro ayaa jidka ku jiri lahaa
Apple waxay soo bandhigi kartaa barnaamijka cusub ee AirPods Pro toddobaadkan munaasabad yar oo lala yeelanayo saxafiyiin si heer sare ah loo soo xulay.
macruufka 13 bil kadib isticmaalkeeda, ma u qalantay?
Waxaan isticmaaleynay macruufka 13 in kabadan hal bil, qaabkan ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka ma la kulmay filashooyin? Dareenno isku dhafan.
Qalabka U1 wuxuu noqon karaa daboolka weyn ee cusub ee iPhone 11. Kaliya lagu xusay soo bandhigida ...
Kuwani waa dhammaan wararka ku saabsan noocyada kala duwan ee alaabooyinka Philips Hue ee aan ku haysanno Spain si rasmi ah u soo bandhigiddooda.
Podcast 11 × 09: Iyo Nuxurka goorma
Dhammaanteen waxaan soo bandhignay Apple cusub dhammaadka bishan, laakiin hadda waxaan si dhab ah u leenahay ...
Netatmo Weather Station ayaa hadda heshay cusbooneysiin firmware ah oo ugu dambeyntii la jaan qaadi doonta barnaamijka 'Apple HomeKit'.
Maya, Sawirada Google ma sii wadi doonaan inay noo ogolaadaan inaan sawiro ku shubno HEIC anaga oo aan isku soo ururin
Sawirada Google way ogaadeen mana sii soconayaan iyagoo noo ogolaanaya inaan sawiro ku soo shubno qaab HEIC ayaga oo aan daruurteenna lagu cadaadin.
Qoraa iA wuxuu qaab mugdi ah ku helayaa iOS 13
Hadda iA Writer ayaa lagu cusbooneysiiyay astaamo badan oo cusub, sidoo kale wuxuu ku darayaa hab mugdi ah oo loogu talagalay macruufka iyo iPadOS oo ka mid ah qaabab kale oo badan.
Sida laga soo xigtay DigiTimes, 16-inch MacBook Pro ayaa la bilaabi doonaa dhamaadka bisha
Sida laga soo xigtay DigiTimes 16-inch MacBook Pro wuxuu bilaabi doonaa dhammaadka Oktoobar
WhatsApp horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeyso cida kugu dari karta kooxaha iyo kuwa aan ku dari karin
Ikhtiyaar cusub oo qarsoodi ah oo WhatsApp ah ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato cidda kugu dari kara kooxaha iyo kuwa aan ku dari karin. Waxaan kuu sharraxeynaa sida ay u shaqeyso.
Maalin kasta - Carruurta iyo iPad / iPhone, tilmaamaha isticmaalka mas'uul ka ah
Maanta waxaan uga hadleynaa Podcast-ka wax ku saabsan xakameynta waalidka, sida loo adeegsado Waqtiga isticmaalka waxaan u xakameyn karnaa waxa yaryarkeenna ay ku sameeyaan ipad iyo iPhone
Ma ogtahay in Apple uu ku qariyay isku xira hillaaca TV-ga Apple TV?
Xidhiidh danab ayaa laga helay Apple TV 4K oo la xidhiidhi kara SAT iyo hawlaha dayactirka softiweerka.
YouTube waa la casriyeeyay ugu dambayntiina waxaa lagu daray taageerada tikniyoolajiyadda 'High Dynamic Range (HDR)' ee fiidiyowyada YouTube-ka ee loogu talagalay iPhone 11.
Hadda Apple Arcade waxaa ku jira dhowr cinwaano cusub oo lagu farxo macaamiisheeda, noocyo iyo noocyo kala duwan.
Qalabka A13 ayaa la xaqiijiyay inuu 20% ka dhakhso badan yahay A12 chip
Warbaahin heegan u ah qalabka ayaa si qoto dheer u falanqeeyay qalabka 'A13 chip' waxayna xaqiijineysaa inay 20% ka dhakhso badan tahay Apple's A12 chip.
Maalinle - Xusuusin Barakaysan
Marka amniga aaladeena ay tahay inuu noqdo ugu badnaan, waxay umuuqataa in hada shuruudo kale oo muhiim ah ay soo galaan ciyaarta, sida bilicdooda.
Khariidadaha Google ayaa kuu oggolaanaya inaad ka digto shil, radar iyo xaalado kale
Toddobaadkan hawsha cusub ee Khariidadaha Google ayaa imaan doonta iOS taas oo aan uga digi karno jiritaanka shil ama radar wadada.
Apple waa shirkadda adduunka ugu qiimaha badan sanadkii toddobaad oo isku xiga
Sannadkii toddobaad ee isku xigta, Apple waa mar labaad midka ugu qiimaha badan adduunka, kana sarreeya shirkad kasta, oo ay ku jiraan kuwa aan tiknoolajiyada ahayn.
Apple Pay waxaa hada baaritaan ku haya guddiga la dagaalanka argagixisada ee Yurub. Dhibaatada ugu weyni waxay ku jirtaa gaashaanka 'NFC chip'
Google Pixel 4 wuxuu abuuraa shaki ku saabsan "shaqadiisa" cusub
Google waxay soo saartay taleefankeeda cusub maalmo kahor, iyadoon loo eegin naqshada, taas oo laga doodi karo laakiin waxay ku saleysan tahay fikradaha ...
Podcast 11 × 08: Cusbooneysiinta, Google iyo Shiinaha
Waxay ahayd toddobaad aad mashquul u ah tallaabooyinka Apple lagu qasbay inuu qaado cadaadis dartiis ...
Shirkadda Twitter-ka ayaa barteeda ku daabacday shuruucda iyo macnaha guud ee tweets ee ay leeyihiin hoggaamiyeyaasha siyaasadda adduunka.
Apple wuxuu bilaabay Beats Solo Pro iyadoo la joojinayo buuqa firfircoon iyo luminta muuqaal muhiim ah, ma haystaan ​​jaakad 3,5mm ah.
5G waa isku xirnaanta mustaqbalka, laakiin dhab ahaantii ma tahay xilligan? Waa maxay faa'iidooyinka ay ina siiso? Miyay horeba loo heli karaa sida dad badani noo sheegaan?
Waxaan ku bilaabaynaa faallooyinka sanad kasta ee ku saabsan qaabka hadda jira ee ay soo saartay shirkadda Cupertino, iyo ...
Mashruuca Mashruucu wuxuu bilaabaa macOS Catalina wuxuuna ku hogaamiyaa wadada barnaamijka guud ee ansax ku ah iPhone, iPad, iyo Mac.
IPhone 12 Pro waxaa la sii deyn doonaa Sebtember 2020 laakiin maanta waxaa jira fikrado horey u muujinaya in laga takhalusi karo darajada iyo afar kamaradood.
U beddelo iPhone X-gaaga iPhone 11 Pro ku dhowaad bilaash iyo ilbiriqsi
Ma rabtaa inaad u beddesho iPhone X-gaaga iPhone 11 adigoon lacag bixinayn waxna kayar shan daqiiqo? Waa wax aad u fudud, waxaan ku soo bandhigeynaa fiidiyoow.
Asturnaanta marwalba waxay ahayd barta ugu muhiimsan ee shirkadda Cupertino, ugu yaraan taasi waa waxa ...
Mustaqbalka Apple Music: fiiro gaar ah u leh farshaxanada iyo muusig toos ah oo dheeri ah
Maamulaha caalamiga ah ee Apple Music ayaa ka dhawaajiyay mustaqbalka aaladda muujineysa muusikada tooska ah iyo muhiimada farshaxanada.
Apple wuxuu bilaabay iOS 13.2 Beta 2 oo leh isbeddelo xiiso leh
IOS 13.2 Beta 2 waxay noo keeneysaa warar xiiso leh sida xulashooyin cusub oo lagu tirtiro barnaamijyada, wax looga beddelo fiidiyowyada iyo emoji cusub
Falanqaynta ugu horreysa waxay soo gabagabeynayaan in iPhone 11 Pro Max uu siinayo tayo maqal ka xun kan iPhone XS Max guud ahaan.
Sida laga soo xigtay Kuo waxaa jiri doona iPad Pro iyo iPhone SE 2 guga soo socda
Sida laga soo xigtay Kuo waxaa jiri doona iPad Pro iyo iPhone SE 2 cusub rubuca hore ee 2020
NYPD waxay muddo dheer awood u laheyd inay furto iPhone
In badan ayaa laga sheegay sanadahan ku saabsan khilaafka weyn ee ku saabsan amniga iOS iyo sida ...
Apple waxay qorsheyneysaa inay xirmo la bixiso Apple Music iyo Apple TV +
Waxaa jira fursad wanaagsan oo Apple ku fekerayo abuurista xirmo adeeg rukumo qiimo jaban.
Waxaan kuu sheegeynaa warka macOS Catalina iyo dareenkeena ugu horeeya kaliya 24 saac kadib markii si rasmi ah loo bilaabay
IPadka noocee ah ee la jaan qaadaya muuqaalka Sidecar ee macOS Catalina?
Apple waxay soo saartay macOS Catalina, oo ah nidaamka cusub ee ay ku shaqeeyaan Macs, oo ay ku jiraan Sidecar. Hubi haddii Ipadkaaga uu taageerayo muuqaalkan cusub.
Waxaan booqanay Apple Store 5aad Avenue cusub ee New York
Kooxda Actualidad iPhone waxay galeen Apple Store cusub ee 5 Avenue ee magaalada New York, Apple Store wuxuu furan yahay 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii.
Maalin kasta - Maxaa ku cusub macOS Catalina
Waxaan kuu sheegeynaa wararka ugu weyn ee macOS Catalina, nooca ugu dambeeya ee nidaamyada hawlgalka ee Mac ee Apple ay hadda bilowday.
App-ka 'Twitch' wuxuu si rasmi ah u yimid Apple TV
Hadda Twitch waxaa si rasmi ah looga bilaabay Apple TV, dib u dhac aan la cafin karin laakiin waxay u timid si ugu dambeyn loo daboolo baahiyaha macaamiisha barta.
Raadinta hurdada ee Apple Watch ayaa ku dhow in la bilaabo
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala Apple ayaa dalbada barnaamij lagu raaco barnaamijyada hurdada ee Apple Watch, shaashadduna waxay u muuqataa inay xaqiijinayso inay ku dhowdahay soo bandhigiddeeda.
Warbixinnada Macaamiisha Magacyada iPhone 11 Pro Smartphone-ka ugu wanaagsan 2019
Maalin kasta - Falanqeynta xilliga dayrta-jiilaalka
Sida ku xusan wararka iyo xanta toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan idin kugu soo gudbineynaa wararka suurtagalka ah ee Apple ay noo soo bandhigi doonto dhammaadka bisha Oktoobar.
Dickinson, oo taxane ah oo madadaalo madoow leh ku leh Apple TV +
Dickinson waa taxanaha cusub ee Apple TV + ee taxanaha asalka ah ee imanaya Nofeembar 1. Tixdani waa shaqo taariikhi ah oo ku saabsan gabyaa caasi ah oo kaftan madow ku hoos jira.
Sarkaalka hawlgalka Apple, Jeff Williams, wuxuu xaqiijinayaa in baaritaanka aan duullaan ahayn ee lagu ogaanayo qaybaha dhiigga ee Apple Watch ay tahay caqabad adag.
Qof Ruush ah ayaa cambaareeyay Apple inuu ka dhigay gay
Waxay umuuqataa in aafada khaniisiinta ay wali ka fogtahay in la waayo inkastoo xaqiiqda ay tahay inaan dhamaynay ...
Maalin kasta - Apple TV, barnaamijka Apple TV, iyo Apple TV +
Waxaan ka wada hadalnay farqiga u dhexeeya Apple TV, barnaamijka Apple TV, iyo adeegga Apple TV +, saddex fikradood oo la xiriira laakiin kala duwan.
Kordhinta rabshadaha ka socda Hong Kong waxay sababtay barnaamijyada qaar in la bilaabo si loogu wargaliyo xilliyada goobaha Applena ay ka baxday mid ka mid ah Talaadadii
Sahan dhowaan la sameeyay wuxuu muujinayaa in 75% dadka isticmaala Netflix aysan daneyneynin AppleTV + ama Disney + muddada gaaban,
Mario Kart wuxuu noqday barnaamijka Nintendo ee ugu guuleysiga badan ee mobilada iyadoo ku dhawaad ​​boqol milyan laga soo dejistay.
Maalin kasta - Waa maxay Fusion Deep iyo sidee u shaqeysaa
Apple waxay soo saartay iOS 13.2 Beta 1 oo sii deynaysa Deep Fusion. Waxaan sharxeynaa sida shaqadan cusub ee kamaradda iPhone 11 u shaqeyso
Sidee ayuu u shaqeeyaa Deep Fusion? Waxaan si faahfaahsan u sharaxeynaa oo aan farsamo ahaan aheyn sida howshan cusub ee kaamirooyinka iphone-kii ugu dambeeyay u shaqeynayo.
Beta-da cusub ee iOS 13.2 wuxuu keenayaa qaar ka mid ah shaqooyinka uu Apple ku dhawaaqay Keynote-kii ugu dambeeyay laakiin aynaan arkin illaa iyo hadda.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay la kulmaan arrimaha batteriga ee iOS 13.1.2
Sida muuqata isticmaaleyaal badan ayaa haysta dhibaatooyin batari iyo daboolis ah tan iyo markii la siidaayay macruufka 13.1.2 waxayna sameynayaan cabashooyinkooda.
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad doorato nooca farriinta farriinta Siri ay u adeegsanayso si caadi ah
Dhawaan waxaan awoodi doonnaa inaan doorano nooca farriinta farriinta Siri ay u adeegsanayso si aan caadi ahayn, waxayna xitaa iska dooran doontaa keligeed midka ugu habboon.
Podcast 11 × 06: Cusbooneysiinta cascoporro
Fiidiyaha toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa qaabka Apple Arcade iyo wararka kale ee la xiriira Apple iyo guud ahaan teknolojiyadda
Oktoobar 30 waxaan ogaan doonaa natiijooyinka maaliyadeed ee rubuckan Apple
Apple waxay soo bandhigi doontaa shirka natiijooyinka dhaqaalaha Isniinta soo socota, Oktoobar 30. Waxaa lafilayaa inay kufiicnaadaan alaabada cusub ee suuqa taala
Waa maxay iyo maxay tahay waxa la qabadsiiyay ee iPhone-ka?
Mid ka mid ah riwaayaddu waa "load optimized", waxaan kuu sheegaynaa waxay tahay, waxa ay ka kooban tahay iyo sida loo qaabeeyo muuqaalkan cusub ee ku jira iOS 13.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 13.1.2 iyo watchOS 6.0.1
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 13.1.2 dhibaatooyinka hagaajinta ee HomePod, iCloud, Camera, shaashadda shaashadda, Bluetooth iyo Shortcuts.
Patent-ku wuxuu hayaa sirta muraayadda dambe ee iPhone 11 Pro
Wax badan oo aan la ogeyn oo ku saabsan muraayadda dambe ee muraayadda dambe ee iPhone 11 Pro oo hadda lagu xalliyay patent-ka Mareykanka.
Apple TV + Ayaa Soo Saaray Filim Cusub Oo Lagu Kordhiyay 'Dadka Oo Dhan'
Apple waxay soo saartaa xayeysiinta cusub ee la dheereeyay ee taxanaheeda cusub ee asalka ah "Dhamaan Aadanaha" oo laga heli karo Apple TV + laga bilaabo Nofeembar 1.
Maalin kasta - Aan ka hadalno baytariyada
Dailky maanta waxaan kahadleynaa amarka degdega ah, lacag bixinta wirelesska, kumbuyuutareedka lafilayo ee iOS 13 ... wax walboo ku saabsan batteriga iphone-keena
Apple waxay dooneysaa inay sii deyso filimadeeda Hollywood kahor Apple TV +
Wiilasha Cupertino waxay damacsan yihiin inay ku sii daayaan filimadooda asalka ah tiyaatarada halkii ay ka sii deyn lahaayeen adeegooda fiidiyoowga ah.
Apple wuxuu dejinayaa Abriil 2020 ugu dambaynta soo gudbinta barnaamijyada iOS 13 iyo iPadOS SDK
Apple waxay dejineysaa xaddidaadda Abriil 2020 si loo cusbooneysiiyo barnaamijyada loona diro barnaamijyo cusub oo lagu abuuray macruufka iyo iPadOS 13 SDK si loo wanaajiyo isticmaalkooda.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 13.1.1 hagaaji dhiqlaha
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 13.1.1 si uu u xaliyo shilalka kala duwan ee leh Siri, Kiiboodhka Saddexaad ee Xisbiga, Kaydinta, iyo Nolosha Battery
Spotify horeyba waxay u taageertay Siri Beta-keeda iOS
Spotify waxay horeyba ula qabsaneysaa codsigeeda iOS 13 si ay ula jaanqaadi karto Siri, oo markaa awood u yeelan karto inay xakamayso loo maqli karo iyada oo loo marayo kaaliyaha Apple.
macruufka 13.1 ayaa xayiraya xukun deg deg ah wireless
IOS 13.1 sidoo kale waxay leedahay cillado yar yar, sida muuqata waxay xayiraysaa lacag bixinta degdegga ah ee fiilooyinka wireless-ka.
Maalin kasta - iPhone 11 Pro Max, ciyaarta cusub ee ka socota Nintendo iyo Amazon ayaa ina duqeynaysa
Podcast maalinle ah oo cusub oo aan uga hadlo khibradeyda iyo usbuuc kadib IPhone 11 Pro Max iyo wararka Nintendo iyo Amazon.
Podcast 11 × 05: Ayaa ugu cusub wax cusub?
Toddobaadkan waxaan uga hadalnay hal-abuurnimada casriga casriga ah ee barnaamijkeena, iyo sidoo kale noocyada cusub ee macruufka iyo iPadOS ee ay Apple billowday.
IOS 13.1 iyo iPadOS hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Cusboonaysiinta muddada dheer la sugayay ee iPadOS ayaa hadda lagu rakibi karaa moodooyinka iPad-ka ee la taageerayo, iyo sidoo kale IOS 13.1 oo loogu talagalay iPhones.
Apple waxay sii deyneysaa filimka 'Trailers' ee laba taxane oo cusub: "Ghostwriter" iyo "Helpsters" oo loogu talagalay Apple TV +
Apple waxay sii deyneysaa laba isjiidjiid ah oo loogu talagalay laba taxane cusub oo laga heli doono Apple TV +. Dhinac, Caawiyayaal iyo dhinaca kale Qoraa cirfiid.
Apple wuxuu sii daayaa watchOS 6.1 Beta 1 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayaa WatchOS 6.1 Beta 1 oo loogu talagalay Soo-saareyaasha Kaliya 24 Saacadood Kahor Soosaarka Cusboonaysiinta iOS 13.1
IPhone 11 Pro Max wuxuu leeyahay shaashadda ugu fiican suuqa
Hal sano oo dheeraad ah shaashadda iPhone-ka cusub ayaa ku guuleysata lambarka koowaad suuqa casriga, iyadoo laga saarayo Galaxy Note 10 +
Apple way cadahay in sanadkaan ay u baahan yihiin inay iibiyaan iPhone-ka ugu badan ee suurta galka ah ka dib markii ay soo saaraan moodellada cusub ay dhaqaajinayaan maalgelinta aan dulsaarka lahayn.
Macruufka 13 wuxuu qarinayaa walxaha ku jira Find My oo xaqiijin lahaa imaatinka Apple Tag
Koodhka ilaha ee iOS 13 wuxuu muujinayaa wararka ku saabsan Apple Tag, aaladda aan u hoggaansami karno walxaha si looga fogaado inay lumiyaan.
Sida loo habeeyo fariimaha isticmaalaha farriimaha ee iOS 13
Nala joog oo soo hel sidaad u habeyn karto fariimahaaga isticmaale farriimaha ee iOS 13 adoo ku daraya "nick" iyo sawir.
Apple waxay horay u sii deysay macruufka 13.1 iyo iPadOS ilaa Sebtember 24
Apple waxay hadda ku dhawaaqday in la siidaayo macruufka 13.1, oo ah dib u eegiskii ugu horreeyay ee iOS 13, iyo sidoo kale iPadOS waxay horay u siiyeen bandhiggooda illaa Sebtember 24.
Steve Dowling, oo ah madaxa isgaarsiinta ee Apple, ayaa ka tagaya shirkadda Cupertino
Madaxweyne ku xigeenka shirkadda isgaarsiinta ee Apple, Steve Dowling, ayaa ka tagi doona shaqadiisa shirkadda kadib 16 sano oo shaqo adag ah.
Diiwaangelinta Apple "Slofie" Brand, Beddelka dhabta ah ee Selfie?
Hadda Apple wuxuu sharciyeeyay magaca "Slofie" ee Mareykanka Mareykanka, ololaha loogu jiro sawir-qaadista oo gaabis ah waa mid daran.
Podcast 11 × 04: IPhone 11 waa xiddig markale
Waxaan falanqeyneynaa falanqaynta koowaad ee iPhone 11 iyo 11 Pro, iyo sidoo kale Apple Watch Series 5 cusub, marka lagu daro wararka kale ee usbuuca
Lagu xaqiijiyay 4GB RAM dhamaan iPhones-ka iyo processor-ka Taxanaha 5-aad
Sida laga soo xigtay Xcode, IPhone 11 iyo iPhone 11 pro labaduba waxay leeyihiin "kaliya" 4GB oo RAM ah, sidoo kale waxaa la ogaaday in Watch Series 5.e chipset
Apple wuxuu bilaabay betas cusub oo ah iOS iyo iPadOS 13.1
Kaliya 24 saacadood kahor furitaanka dadweynaha ee iOS 13, Apple waxay soo saartay Beta afaraad ee iOS 13.1 iyo iPadOS 13.1, oo imaan doona 30ka Sebtember.
Philips wuxuu bilaabay Box Box kaas oo kaashanaya nalalka Hue-ga TV-gaaga
Kala duwanaanta Philips Hue waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo nalalkaaga HomeKit, Philips sidoo kale ...
Apple waxay maalgalin weyn ku sameysaa Corning, milkiilaha "Gorilla Glass", waayo?
Layaab malahan in Apple ay ku dhowaad $ 400 milyan galisay Corning, laakiin ... waayo?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wixii ku saabsan macruufka 13 ka hor inta aanad cusbooneysiin
IOS 13 waxay ku dhowdahay geeska, kuwa naga mid ah ee haysta tiro aad u tiro badan oo aaladaha Apple ah ayaa garanaya midka ...
Apple waxay daabacday laba xayeysiis oo cusub oo kor u qaadaya kamaradaha iyo iska caabinta weyn ee iPhone Pro cusub.
Kani waa gabi ahaanba buugga Apple Arcade ee la heli karo Sebtember
Apple Arcade hadda waa loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha iOS 13 waana kani buugga ugu horreeya ee 55 kulan fiidiyoow ah oo la heli karo.
In kasta oo wax waliba jiraan, iPhone 11 Pro ayaa ka sii dhumuc weyn iPhone XS
In kasta oo naqshadeynta dib loo habeeyay iyo midabbada cusub, iPhone 11 Pro way ka sii dhumuc weyn tahay iPhone XS, muxuu iPhone sannadkan u buuran yahay?
Apple Arcade ayaa hogaaminaya oo hadda si buuxda looga heli karaa iPhone-ka, waxaan ku tusaynaa "Netflix-ga ciyaaraha fiidiyowga" cusub ee Apple soo saartay.
Dhammaan wararka ku saabsan Caafimaadka iyo Waxqabadka ee iOS 13
Waxaan dooneynaa inaan ku tusno wax kasta oo ay iOS 13 noogu diyaarisay barnaamijyadeeda Caafimaadka iyo Waxqabadka si aan uga soo saarno dhammaan waxqabadka.
Maalinle - Cusboonaysiinta jadwalka iyo talooyinka cusbooneysiinta
Waxaan kuu sheegeynaa jadwalka taariikhda cusub ee Apple uu bilaaban doono Sebtember 19 laakiin ma dhammaan doono illaa iyo inta lagu jiro deyrta
Maalin kasta - Gabagabada Muhiimka ah iyo Qarsoodiga aan la xallin
Gabagabada kama dambaysta ah ee ku saabsan soo bandhigida Apple iyo waxyaalaha qarsoon ee aan la xallin sida RAM-ka iPhone-yada cusub iyo dib u soo celinta.
IPhone 11 ayaa leh dib u soo celin laakiin waa naafo tahay
IPhone-yada cusubi waxay lahaan karaan dhamaan qalabyada lagama maarmaanka u ah dib u soo celinta laakiin Apple ayaa ku curyaamin kara barnaamijka
Mexico waxay furaysaa Dukaan cusub oo Apple ah bisha Sebtember 27
Markay tahay Sebtember 27, Apple wuxuu furi doonaa dukaanka labaad ee Apple oo ku yaal Mexico, gaar ahaan Antara Shopping Center
IPad-ku wali waa King ku jira suuq hoos u dhacaya
Falanqeyntii ugu dambeysay ee suuqa waxay sii wadaa saadaalinta mustaqbal aan la hubin ee kaniiniyada, si kastaba ha noqotee iPad-ku wuxuu sii wadaa inuu ku koco iibka.
Apple way diidi doontaa dhamaan barnaamijyada aan lagu horumarin Xcode 11 isla markaana la jaan qaadi kara dhamaan shaashadaha wax soo saarka laga bilaabo Abriil 2020.
IPhone XS wuu baaba'ayaa, kuwani waa qiimaha cusub ee baaxadda iPhone
Waxaan kuu sharraxeynaa sida qiimaha iPhone-yada kala duwan ay ugu jiraan buugga cusub ee Apple ka dib markii la soo bandhigay iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro.
Maqaarka Loop iyo suunka Milanese ayaa si aad ah qiimo ugu dhacaya
Shirkadda Cupertino ayaa naga yaabisay hoos u dhac weyn oo ku yimid xargaha Loop iyo Milanesa, oo hadda leh qiimo aad u hooseeya.
iPhone 11, sababta iPhone-ka ugu iibinta badan amaan u noqon doono
Sannadkii hore waxaan dhammaantiin ka wada hadalnay sababaha ay u keenayaan iPhone-ka ...
Tani waa Apple Arcade, baarka ciyaarta fiidiyowga ee bilaashka ah ee Apple
Apple Arcade, Netflix ee ciyaaraha fiidiyowga ah ee Apple ay u fidin doonto dhammaan isticmaaleyaasheeda, waxaan ku tusinaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato adeeggan cusub.
Kiiska hufan wuxuu ku yimaadaa iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro
Hadda kiiska hufan ee ka socda Apple wuxuu la jaan qaadayaa iPhone 11 iyo labada nooc ee iPhone 11 Pro ee "kaliya" 45 euro.
Podcast 11 × 03: Waxaan falanqeyneynaa soo bandhigida iPhone 11 iyo wax kasta oo kale
Ka dib markii la soo saaray iPhone 11 cusub, Apple Watch Series 5 iyo iPad cusub, waxaan si qoto dheer u falanqeynay Muhiimadda Apple.
Waxaan soo dhaweyneynaa iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max, waxaan ku tuseynaa dhamaan astaamaheeda iyo waxa aad ka ogaan laheyd calanka cusub ee Apple.
Marka soo bandhigida IPhone-ka cusub ee 11 la dhammeeyo, waxay hadhsan tahay in laga hadlo macruufka 13, waxaan kuu keenaynaa taariikhda rasmiga ah ee la bilaabay iOS 13 iyo iPadOS.
iPhone 11, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iibiyaha ugu fiican ee Apple
Kani waa iPhone-ka cusub ee 11, waxaan kuu sheegeynaa astaamaha ay yihiin, qiimahooda iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iibiyaha cusub ee Apple ugu wanaagsan.
Waxaan ku sii soconeynaa taxadarka ugu badan ee muujinta tooska ah ee soo bandhigida Apple ee San Francisco taas oo aan ku aragno ...
Lix midab, laba kamaradood iyo hagaajinta tilmaamaha gudaha ayaa ah waxyaabaha cusub ee cusub ee Apple iPhone 11.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wararka ku saabsan iPad-ka cusub ee 10,2-inji ah oo loogu talagalay in sida ugu badan looga faa’iideysto nidaamka cusub ee iPadOS ee ku shaqeeya.
Tim Cook wuxuu ka faa'iideystey furaha muhiimka ah ee Sebtember 11 si uu u soo bandhigo imaatinka Apple TV + bishii Nofeembar 1 iyada oo qiimaheedu yahay $ 4,99 bishiiba.
Si dhab ah u isticmaal kaarkaaga Apple, khudaarta ku jar
Kaarka gaarka ah ee Apple wuxuu leeyahay faa iidooyin badan oo ay ugu wacan tahay naqshaddiisa iyo qalabkeeda, wuxuu awood u leeyahay inuu si fudud u gooyo khudradda, ma ahan in wax walba ay qarashgareyn doonaan.
Hadda nalalka Xiaomi waxay horeyba ula jaanqaadeen howlaha HomeKit iyo Siri iyada oo loo marayo cusbooneysiinta barnaamijka.
Ming-Chi Kuo wuxuu sii deynayaa saadaashiisa daqiiqada ugu dambeysa ee meesha ka saaraya dib u soo celinta iPhone-yada cusub, iyo sidoo kale qalinka Apple iyo USB-C
Tile wuxuu arki karaa iibinta alaabteeda goobta oo la yareeyay ka dib markii ay suurtagal tahay soo bandhigida qalab cusub oo lagula socdo Apple.
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo raaco soo bandhigida taleefanka cusub ee iPhone 11 isla markaana si toos ah noolala qaybqaadato, iyadoo loo marayo caymiskeena
Apple waxay mar kale ku dhibtooday Shiinaha shirarka dhirta Foxconn iyo qaabka ay ula dhaqmaan shaqaalahooda.
Kiisaskaasi waxay xaqiijinayaan naqshadda iPhone 11 iyo astaanta xudunta u ah
Daadadka kiisaska difaaca ee iPhone XI waxay xaqiijinayaan dib u qaabeynta qaabka kamaradda iyo xaaladda astaanta.
Maxay Apple u tahay astaanta la doorbidayo dadka isticmaala Isbaanishka inkastoo ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu yar iibinta? Waxaan falanqeyneynaa khilaafkan xiisaha leh.
Joseph Gordon-Levitt si uu u jiheeyo riwaayad cusub oo loogu talagalay Apple TV +
Mr. Corman wuxuu ahaan doonaa taxanaha cusub ee Apple TV +, Riwaayad uu jilayo, oo uu qoray soona saaray Joseph Gordon-Levitt
Wax kasta oo Apple ay ku soo bandhigi doonto Muhiimka 10aad
Kani waa soo koobid leh wax kasta oo Apple ay soo bandhigeyso oo ay la socoto iPhone XI cusub inta lagu gudajiro Muhiimka ah ee aan sugeyno mudada dheer.
Muhiimadda soo socota ee soo bandhigista iPhone-ka ee 2019 ayaa laga heli doonaa YouTube markii ugu horreysay, sidaas awgeedna la ballaadhinayo xulashooyinka la heli karo si looga daawado meel kasta.
Apple waxay bilaabi kartaa SensorKit, oo ah xirmo horumarineed oo cusub oo u furi doonta marin u helitaanka tiro badan oo dareemayaal ah aaladaha baaritaanka.
Soosaarayaasha kiiska mararka qaarkood waxay ka shaandheeyaan naqshadaha iyo midabada aaladaha Apple, xaaladdan midkood ayaa muujinaya midab ka duwan inta kale
Dalxiis ayaa ugaarsada iPhone X duulimaadka bartamaha tareenka rolalka
Bloomberg waxay kubiirtay hada xaqiijineysa in sanadka 2020 aan heysan doonno iPhone oo wata astaamaha faraha faraha ee kuxiran shaashada
Gmail wuxuu ka ilaaliyaa adeegsadayaasheeda amniga ka hortagayaasha aan la arki karin
Gmail ayaa soo saartay cusbooneysi cusub oo leh aalad cusub oo lagu xakameynayo raadraacayaasha aan la arki karin isla markaana si toos ah loogu helo sawirrada.
Apple ayaa hoos u dhigtay inay soo saarto taxanaha Bastards ee uu jilayo Richard Gere
Mid ka mid ah mashaariicda aakhirka aan ku arki doonin iftiinka Apple TV + wuxuu noqon doonaa taxanaha uu jilayo Richard Gere ee cinwaankiisu yahay Bastards.
Waan ognahay faahfaahinta ku saabsan hawlgalka muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay iyo astaamaha cusub ee tilmaame ee ay Apple soo bandhigi doonto 10-ka
Xog sir ah oo la xiriirta IOS 13.1 ayaa si cad u cadeysay waxa ay noqon doonaan magacyada cusub ee iPhone 11 waxayna u muuqataa inaysan jiri doonin wax lala yaabo.
Sawirro cusub oo ah iPhone 11 Pro ayaa u muuqda kuwo soo jeedin kara in kamaradda saddex-geesoodka ah ee kama dambaysta ah aysan ka soo bixi doonin gadaasha iPhone-ka.
Hal toddobaad kadib markii la sii daayay macruufka 12.4.1 kaas oo albaabbada u laabaya JAILBREAK iOS 12.4, wali waa loo heli karaa saxiixa.
Podcast 11 × 02: Betas, amniga, xanta iyo toddobaad loogu talagalay iPhone 11
Toddobaad ka dib markii la soo saaray iPhone 11 waxaan falanqeyneynaa warka Apple iyo adduunka tiknoolajiyada iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay
Tim Cook wuxuu ku deeqay in ka badan 23.000 saamiyada oo u dhiganta $ 5 milyan
Maamulaha Apple Tim Cook wuxuu ugu deeqay in ka badan 23.000 saamiyada oo u dhiganta $ 5 milyan hay’ado samafal oo aan hore loo aqoon.
Weerarkii iOS soo gaadhay muddo laba sano ah iminkana la xaliyay, Shiinaha ayaa u adeegsaday xakamaynta qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Uighur
IOS waxay la kulantay mid ka mid ah weeraradii ugu muhiimsanaa ee taariikhdeeda, oo ay daahfurtay Google oo gebi ahaanba la xaliyay bilo ka hor.
Barnaamijka dayactirka cusub ee shirkadaha saddexaad ama weyn ee saddexaad, taas oo ah, ka baxsan Apple lafteeda. Dhammaan waxaa caddeeyay shirkadda
Apple waxay xaqiijineysaa bisha Sebtember inay tahay taariikhda ay soo bandhigi doonto iPhone-ka cusub 11. Ma ognahay wax walba mise waxaa jiri doona waxyaabo lala yaabo?
Apple waxay raaligalin ka bixisay dhagaysiga Siri waxayna ku dhawaaqday waxay samayn doonto wixii hada ka dambeeya
Apple waxay raaligelin ka bixineysaa dhageysiga codsiyadayada Siri waxayna sidoo kale ku dhawaaqeysaa isbeddelada ay codsaneyso si loo ixtiraamo asturnaantayada.
Maxay Apple u sii deyneysaa macruufka 13.1 Beta 1 maxaana ku cusub?
Aynu aragno sababta Apple u sii daayay macruufka 13.1 Beta 1 iyo waxa ku cusub nooca cusub ee soo-saareyaasha, gaar ahaan faahfaahinta naqshadeynta.
Apple ayaa ku dhawaaqday kaarka cusub ee Apple kaarka ay ku leedahay YouTube channel
Fiidiyow cusub oo ay Apple ku daabacday kanaalka YouTube-ka ayaa muujinaya wararka iyo shaqooyinka ugu muhiimsan ee kaarkaaga deynta ah: Kaarka Apple.
Netflix waxay ku darsataa qaybta 'Latest' sidaa darteed waxba nama seegi doono
Netflix waxay ku darsataa hawl cusub barnaamijka loo yaqaan 'kii ugu dambeeyay', halkaas oo cinwaannada soo bixi doona maalmaha soo socda ay soo muuqan doonaan isla markaana xusuusin lagu dabaqi karo.
Waa Maxay Sababta Aan Ugu Fikirayo iOS 13 inuu noqon doono Nooca ugu wanaagsan ee iOS
Kuwani waa sababaha noo horseedaya inaan rumeyno in iOS 13 ay tahay nooca ugu fiican ee macruufka sanadihii la soo dhaafay, iyo suurtagal taariikhda.
Singer Taylor Swift ayaa xaqiijineysa in Apple ay qabaneyso fadhiyada Music Lab iyada oo heesteeda ah Waxaad U Baahan Tahay Inaad Degto
Daraasad dhowaan soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in dadka isticmaala iOS ay sii kordhayaan iphone-yadooda waqti ka dib, guud ahaanna dadka isticmaala taleefanada wax yar ayey iibsadaan.
Apple waxay muujineysaa inay sii wadayso inay ka shaqeyso hagaajinta iCloud, markan waxay ku dartay arjiga Xusuusinta iCloud Web dhamaan isticmaaleyaasha.
Spotify waxay kordhisay mudadeeda tijaabada ilaa 3 bilood si ay ula mid noqoto Apple Music
Dagaalku inuu noqdo adeegga ugufiican ee socodka, Spotify wuxuu kordhiyaa muddadiisa tijaabada illaa 3 bilood isagoo raacaya raadadka Apple Music.
Mark Gurman wuxuu ku daabacaa dhammaan faahfaahinta iPhone-ka cusub, iPad Pro, Apple Watch, AirPods iyo Mac oo Apple qorsheyneyso inay soo bandhigto sannadaha 2019 iyo 2020.
Maanta imaatinka Apple Music ee qalabka Amazon Echo iyo dhammaan kuwa la jaan qaada Alexa ee Spain iyo Jarmalka ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay
Porsche waxay u soo bandhigi doontaa waxyaabaha ku jira Apple Music dhammaan isticmaaleyaasheeda
Hadda Porsche waxay la mid tahay Tycan iyo unugyada cusub waxay heli doonaan marin aan xadidnayn oo Apple Music gebi ahaanba bilaash ah, marka lagu daro CarPlay.
Kuwani waa khaladaadka iyo cilladaha ugu badan ee ku jira iOS 13 Beta 7
Kuwani waa khaladaadka iyo cilladaha ugu badan ee ku jira iOS 13 Beta 7, laakiin sidoo kale dhibaatooyinka qaar ee la xaliyay sida isticmaalka batteriga.
Spotify waxay udiyaarineysaa xakameynta waalidiinta ee ku saabsan rukunka qoyskaaga
Dhawaan maareeyayaasha ka mid noqoshada qoysaska Spotify waxay awoodi doonaan inay adeegsadaan nidaamka xakameynta waalidka.
Disney + waxay xaqiijineysaa inay la jaan qaadi karto tvOS iyo iOS
Disney waxay xaqiijisay in fiidiyowgeeda ku saabsan adeegga dalabka, Disney +, uu imaan doono 12-ka Nofeembar, waxayna awood u yeelan doontaa inay gaarto qalabka iOS iyo tvOS.
Trump wuxuu dib uga fikirayaa arrinta canshuuraha ka dib cashada Tim Cook
Madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta ka sheegay in Samsung ay faa'iido ka heli laheyd Apple markii canshuuraha wax soo saarka Shiinaha la dhaqaajinayo.
Apple wuxuu soo bandhigayaa loolanka cusub ee waxqabadka ee dhici doona 25 Ogosto oo u dabaaldegaya sannad-guuradii 100aad ee Grand Canyon ee Colorado.
Shirkadda Corellium waxaa dacweeyay Apple si ay ugu ganacsato waxa ugu badan ee macruufka ah iyada oo aan loo idman.
Sawir ka muuqda macruufka ugu dambeeyay ee 13 Beta wuxuu umuuqdaa inuu xaqiijinayo Sebtember 10 inuu yahay taariikhda munaasabadda soo bandhigida ee iPhone 11
Daadad cusub ayaa ka soo muuqanaya iPhone 11 ee soo socda, oo wata batteri ka weyn, midabyo cusub isla markaana ilaalinaya isku xiraha Danabka.
Dalka Shiinaha, tallaabooyin adag ayaa laga qaaday iibinta iyo ka ganacsiga qalabka been abuurka ah ee Apple. Markan ...
Apple waxaa laga yaabaa inay la shaqeyso Spotify si ay Siri uga dhigto heesaheeda
Spotify wuxuu wadahadal la yeelan karaa Apple si uu uga dhigo Siri awood uu ku ciyaaro heesaha iyada oo loo marayo adeegiisa mahadnaqa SiriKit.
LIFX waxay ku dhawaaqday labadeeda alaabood ee cusub deyrtan, aaladda loo yaqaan 'LED strip' si loo dhigo telefishanka gadaashiisa iyo nalka shumaca midabbada badan leh.
Maanta waxaa jira xulashooyin badan oo loogu talagalay haakarisku inay ku galaan kombuyuutarradeena, mid ka mid ah ayaa wax ka beddelaya xarigga asalka ah ee Apple.
Readdle ayaa sii daayay PDF Khabiir 7 oo ku daraya hawlo fara badan iyo tiro ka mid ah sifooyinka PRO iyada oo loo marayo iibsashada barnaamijka.
Deyrtan ayaa imaan karta iPad Pro cusub oo leh muraayadaha saddex-geesood ah iyo 2019 "iPad 10,2 oo leh laba kamaradood, oo ah qaabka hadda loo yaqaan 'iPohne XS'.
Apple waxay u direysaa emayllo macaamiishii hore ee barnaamijkeeda Apple Music si loogu dhiirigaliyo inay kusoo laabtaan bil bilaash ah.
Apple waxay bilaabi kartaa qalabkeedii ugu horeeyay ee isku laabma sanadka 2020, inkasta oo uu noqon doono iPad, inbadan sugaya si uu u arko iPhone-ka ugu horeeya ee tikniyoolajiyadan leh.
Kuwani waa qaar ka mid ah wararka ku saabsan Kaarka Apple
Apple waxay bilowday inay soo saarto Kaarka Apple waana kuwan qaar ka mid ah astaamaha cusub ee ka imanaya heshiiska macaamiisha Goldman Sachs.
Bilowgii sanadka 2018, mid ka mid ah khilaafaadka saameynta ugu badan ku yeelan kara shirkadda la sii daayay ayaa ah xarunta ...
Mig-Chi Kuo wuxuu xaqiijiyay in qiimaha wax soo saarka Apple uusan waxba iska badali doonin wajiga canshuuraha cusub ee xukuumada Trump.
Falanqeyntii ugu dambeysay waxay muujineysaa in Alphabet ay tahay shirkadda leh keydka lacagta ugu badan adduunka, sidaasna uga sarreysa Apple, Microsoft iyo Amazon.
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo joojiyo dhageysiga wada hadalada aan kula leenahay Alexa shaqaalaha Amazon iyadoo loo marayo barnaamijka iOS.
Apple ayaa kuu oggolaan doonta inaad doorato haddii aad rabto in lagu maqlo iyo in kale
Ka jawaab celinta khilaafka ka dhashay dhageysiga amarrada Siri, Apple waxay hakisay kaaliyeheeda barnaamijka horumarinta
Spotify waxay ku dhawaaqeysaa inay leedahay 108 milyan oo isticmaale oo wata macaamiisha Premium
Shirkadda Spotify ayaa ku dhawaaqday inay gaadhay 108 milyan oo adeegsadeyaal ah oo loo yaqaan 'Premium subscription' iyo in ka badan 230 milyan oo qof oo firfircoon.
At Apple waxay horeyba u haysteen natiijooyinka dhaqaale ee Q3-kan miiska saaran waxayna umuuqataa in rubuckan ay sifiican uqabteen wax walba.
Apple waxay kubiirtay Mashruuca Wareejinta Macluumaadka Microsoft, Facebook, Google iyo Twitter iyadoo ujeedadu tahay in internetka laga dhigo meel nabdoon.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin dhammaan wararka ku saabsan beta-kan shanaad ee iOS 13 uu leeyahay, beta aad u dhalaalaya oo naga yaabinaya.
Apple wuxuu bilaabay betas cusub oo ah iOS 13, iPadOS iyo tvOS 13, sidaas darteed wuxuu ku gaarayaa Beta 5 barnaamijyadan, waqtigan kaliya loogu talagalay horumariyeyaasha.